ISlovenia inokuba yindawo elandelayo ehamba phambili eYurophu
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseSlovenia eziziiNdaba » ISlovenia inokuba yindawo elandelayo ehamba phambili eYurophu
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • Xanduva • Iindaba zaseSlovenia eziziiNdaba • Tourism • Intetho yezoKhenketho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Ngamana 19, 2021
Imveliso yokhenketho yaseSlovenia ngokwendalo iyahambelana neendlela ezisakhasayo zabahambi, ezinokubona ukufika kwamazwe aphindaphindiweyo ngokukhawuleza emva kwesifo.
Ukufika kwamazwe aphesheya eSlovenia ngo-2019 kufikelele kwizigidi ezi-4.7
Inxalenye ebalulekileyo yeendwendwe zamanye amazwe zivela kwiimarike zoovimba abanxulunyaniswe nobume belizwe
Kukho amandla amakhulu eSlovenia ukuba angene kwimakethi yemithombo engafakwanga kwindawo engaphaya
Ngelixa ubuninzi obungaziwayo kwinqanaba lehlabathi, iSlovenia inempawu eziphambili ezifunekayo ukuze zibe yindawo elandelayo yaseYurophu kuhambo lwasemva kobhubhane.
Ngokwedatha yamva nje, abafikayo bamanye amazwe ukuya Sloveniya Ngo-2019 ifikelele kwizigidi ezi-4.7. Itotali iyonke yayithetha ukuba ilizwe elincinci lase-Yurophu ekuMbindi we-Europe lalingekabikho nakwindawo eziphambili ezingama-25 kumazwe atyelelweyo eYurophu. Ukuqhayisa ngexabiso lokuKhula koNyaka (i-CAGR) ye-9.7% phakathi ko-2010 kunye no-2019 ngokufika kwabantu abangenayo, bekucacile ukuba ilizwi beliqala ukuphuma kwimveliso yezokhenketho engaxabisekanga kakhulu eSlovenia. Nangona kunjalo, isahlulo esibalulekileyo sabakhenkethi bamanye amazwe sivela kwimithombo yentengiso yemithombo yelizwe enxibelelene nesizwe, malunga neepesenti ezingama-50 zabahambi abangena ngaphakathi ngo-2019 bevela e-Austria, e-Itali, eHungary, okanye eCroatia. Oku kuthetha ukuba kukho amandla amakhulu eSlovenia ukuba angene kwimakethi yemithombo engafakwanga ngaphambili.
Imveliso yokhenketho yaseSlovenia ngokwendalo iyahambelana neendlela ezisakhasayo zabahambi, ezinokubona ukufika kwamazwe aphindaphindiweyo ngokukhawuleza emva kwesifo. Kwi-2016, iSlovenia yabizwa njengelizwe elizinzileyo kwihlabathi ngeMbasa yeLifa leMveli leLizwe, kwaye kwakuloo nyaka ikomkhulu laseLjubljana lanikwa isihloko se-European Green Capital yiKhomishini yaseYurophu. Ngokwe-GlobalData *, i-42% yabasebenzisi behlabathi ngoku 'bahlala' okanye 'bahlala' bephenjelelwa yindlela imveliso okanye inkonzo engayingcolisi imeko yendalo, ebonisa ukuba iSlovenia inokuba yeyona ndawo iphambili kubahambi abanenkathalo emva kwesifo.
Ukongeza, ngaphezulu kwesinye kwisithathu seSlovenia silele kuthungelwano lwe-EU lweendawo ezikhuselweyo ngokukodwa, ilizwe linikezela ngeendlela ezili-10,000 XNUMX zokuhamba intaba. Ngenxa yobhubhane, uninzi lwabahambi luya kuqhubeka nokukhetha iiholide zangaphandle kwiindawo ezikude kakhulu neendawo ezinabantu abaninzi. Olu hlobo luza kudlala naseSlovenia, ngakumbi abathengi abaninzi banokubona ilizwe lisekho 'kwindlela evulekileyo' kwaye lingonakaliswanga ngabakhenkethi.
Ukuchitha ixesha elininzi kwi-Intanethi kunokonyusa nokwazisa ngeSlovenia. Ngokwedatha yakutshanje, iipesenti ezingama-37 zabathengi behlabathi baqalisile ukuchitha ixesha elininzi kwi-Intanethi ngenxa yesifo. Ukuchitha ixesha elininzi kwi-Intanethi kukhokelele kubathengi abaninzi ukukhangela indawo yabo elandelayo yeholide. Ukubeka ixesha elininzi ekwenziweni kohambo lwendlela kukonyusa ukubakho kwabathengi ekukhetheni iindawo ezinendawo ngenxa yamanqanaba aphezulu ophando. Oku kungakhokelela ekubeni imveliso yezokhenketho yaseSlovenia ityhilwe kubathengi abaninzi kwihlabathi liphela.
Nangona iSlovenia inendlela ende yokuya kukhuphisana nezinto ezithandwa yiSpain neFrance, ilizwe elinokubonelela ngalo lihambelana ngqo neemfuno zabahambi abasakhulayo. Ukudityaniswa nokonyuka kwexesha elichithwe kuphando lwendawo ekuyiwa kuyo, ukubakho kwendawo okuya kuyo kunokubonakala ngakumbi kwiimarike eziphambili zomhlaba wonke.
Ukuhamba ngeYurophu Slovenia tourism